बालकलाकारका रूपमा सलोन बस्नेतले रुवाए, हिरो भएपछि हँसाउँदै छन् । यस्तो परिवर्तन कसरी आयो ?
प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा स्कुले विद्यार्थीको पर्फमेन्स थियो  । प्रतियोगिताको मुख्य निर्णायकचाहिँ हिरो भुवन केसी  ।
एउटा सानो बालकले अभिनय, संवाद र नृत्यसहितको प्रस्तुति दिएपछि भुवनले आफूलाई रोक्न सकेनन् । स्टेजमा उक्लिए । फुच्चेलाई बोके र घोषणा गरे, ‘म नेपालीबाबु फिल्म बनाउँदै छु । यही बाबुलाई हिरो बनाउँछु ।’ बनाए पनि ।
उनी अर्थात् सलोन बस्नेत । निर्देशक शोभित बस्नेतका छोरा । त्यतिबेला सलोन पाँच वर्षका थिए । दुई दशकअघिको त्यो पल यसरी सम्झन्छन्, ‘मलाई भुवन अंकलले चिन्नुभएको थियो/थिएन, थाहा भएन तर स्टेजमा उहाँले बोकेको सम्झँदा अझै रोमाञ्चित हुन्छु ।’ नेपालीबाबु सुपरहिट भयो । बाल कलाकारमा सलोन निर्विकल्प जस्तै बने । त्यहाँबाट सुरु भएको उनको अभिनय यात्रा रोकिएको छैन । हाँस्दै भन्छन्, ‘बच्चैबाट सुरु भयो, बूढो भइन्जेलसम्म रोकिन्न । अभिनयबाहेक अरू गर्न पनि मन लाग्दैन ।’
रोचक कुराचाहिँ के भने, बाल कलाकारका रूपमा सलोनले धेरैलाई रुवाए । गम्भीर प्रकृतिका भूमिकामा देखा पर्थे । तर वयस्क भएपछि पहिचान पूरापुर फेरियो, उनको कामै हँसाउने भएको छ । प्रायः हिरोको साथी बन्छन्, जसले फिल्ममा ‘फ्रेस’ महसुस गराउँछ । सलोन भन्छन्, ‘बच्चामा रुवाको–रुवाइ गर्थें, अहिले हँसाको हँसाइ । म त कलाकार परें, जे भन्छन्, त्यही गर्छु ।’ कमेडीकै कारण हुनुपर्छ, कतिपय फिल्ममा मुख्य हिरोभन्दा सलोनकै बढी चर्चा हुन्छ ।
५ देखि १४ वर्षको उमेरसम्म सलोनले लगातार ३५ फिल्म खेले । कुनै फिल्ममा सानो छँदाका राजेश हमाल हुन्थे, कुनैमा राजेशको छोरो । त्यतिबेला चलेका प्रायः सबै हिरोसँग काम गरेका छन् उनले । सेटमा बुबा शोभितसँगै जान्थे, निर्देशकले भनेको संवाद टपक्क टिप्ने र दृश्यको भावअनुसार अभिनय गर्ने क्षमताले उनलाई प्रिय बनाउँदै लग्यो । ‘हामी तीन भाइ’ पछिचाहिँ फिल्म खेल्न चटक्कै छोडे । कारण यस्तो रहेछ, ‘मेरो उमेर नै अधकल्चो भयो । न बच्चाको भूमिकामा सुहाउने, न हिरोको । एसएलसी पनि आउँदै थियो । त्यसैले एक्सन–कट्भन्दा पढाइमा ध्यान दिन थाले ।’ आठ वर्ष यत्तिकै बित्यो । पढाइसँगै बुबाको फिल्ममा सहायक निर्देशक भए ।
उनी फेरि अभिनय सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा निश्चिन्त थिए तर कहाँबाट कसरी मेलोमेसो मिलेन । त्यही बेला भेट भयो, निर्माता सुनील रावलसँग । नयाँ फिल्म होस्टेलका लागि सलोनलाई प्रस्ताव गरे । यही फिल्मबाट भुवन केसीका छोरा अनमोल केसी डेब्यु गर्दै थिए । सलोन सम्झन्छन्, ‘मलाईचाहिँ जंगे नामक चरित्रले तान्यो किनभने त्यो पात्र मसँग नजिक थियो ।’ चरित्रलाई आत्मसात् गरेरै हुनुपर्छ, होस्टेलमा सलोन रुचाइए । त्यसपछि भटाभट फिल्म पाए । एउटा साथी, आभास, लभ सब, गाजलु, ए मेरो हजुर २, यात्रा, ए मेरो हजुर ३ लगायत ।
अहिले हलमा सलोन अभिनीत हजार जुनीसम्म चलिरहेको छ । तर यी सबै फिल्ममा सलोनको रोल उस्तै छ । हिरोको साथी अनि हँसाउने । भिन्न भूमिकाले कलाकारलाई जीवन्त बनाउँछ भनिन्छ । तर सलोनचाहिँ ‘टाइपकास्ट’ भइसके, त्यो पनि करिअरको सुरुवातमै । उनी आफैंलाई कस्तो लाग्ला ?
सलोनका अनुसार आफ्नो चाहभन्दा दर्शक र फिल्ममेकरको माग हो यो । भन्छन्, ‘दर्शकले मलाई कमेडी रोलमै रुचाइरहनु भएको छ, फिल्ममेकरले त्यस्तै रोलमा अफर गर्नुहुन्छ । मलाई पनि मज्जा लाग्छ ।’ यद्यपि हास्यप्रधान भए पनि हरेक फिल्ममा केही न केही नयाँ गरिरहेका हुन्छन्, पात्रलाई रोचक बनाउन खोज्छन् । तर समस्या उही, नोटिस हुन्न । उनी थप्छन्, ‘बोल्ने शैली, हुलिया, मनोवृत्तिमा बदलाब ल्याइरहेको हुन्छु तर कमेडी नछुट्ने भएकाले हेर्नेलाई उस्तै–उस्तै लागेको हुनुपर्छ ।’
त्यसो त, उनले फिल्ममा अलि गम्भीर भूमिका नखेलेका होइनन् तर धेरैले ख्यालै गरेनन् । उनकै शब्दमा, भर्सटाइल काम गर्न समय बाँकी छ । त्यसैले अहिले जस्तो चरित्रको अफर आइरहेको छ, त्यसलाई नै अब्बल बनाउन प्रयासरत छन् । सलोनका फ्यानको अर्को गुनासो हो, सहायकमात्र होइन, मुख्य भूमिकामा पनि अभिनय गर्नुपर्‍यो । सलोन आफैंलाई कहिलेकाहीँ यस्तो महसुस नहुने होइन । भन्छन्, ‘तर भूमिका लामो हुनु नै सबथोक होइन । आफूले पाएको भूमिकालाई जीवन्त बनाउनु नै कलाकारको दायित्व हो । मेरो प्रयास त्यही रहन्छ ।’ नयाँ फिल्म लक्का–जवानलाई लिएर उनी उत्साही छन् । कारण– हँसाउने मात्र होइन, हिरोइनसँग रोमान्स पनि गर्दैछन् ।
१ हेमराज बीसी
२ निश्चल बस्नेत
३ विकास आचार्य
४ झरना थापा
५ दिनेश राउत
२ आर्यन सिग्देल
३ अनमोल केसी
४ दयाहाङ राई
५ विपिन कार्की
१ नम्रता श्रेष्ठ
३ साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह
४ स्वस्तिमा खड्का